रेलवे स्टेशन 2021 को छेउमा सोची होटलहरू
कुन सेवाहरू यात्रुहरूलाई प्रदान गरिएको छ
ट्रेनको प्रत्याशामा के गर्ने
तालिका स्टेशन Suchi वर्ष
रेल स्टेशन स्टेशन Sochi
तपाईं एक दस सुविधाजनक नगद रेजिस्टरहरू मध्ये एकमा टर्मिनलमा आइपुग्नको लागि टिकट खरीद गर्न सक्नुहुन्छ। खरीदको लागि भुक्तान गर्नुहोस् तपाईंलाई नगद वा बैंक कार्ड प्रदान गरिनेछ।
Adler स्टेशन UL मा होटलबाट6किलोमिटर छ। लेनिन, 113. टर्मिनलमा पुग्न धेरै सुविधाजनक तरिकाहरू छन्।
यदि तपाइँ तपाइँको आफ्नै फाइदा लिन वा कार भाडा लिने निर्णय गर्नुहुन्छ भने, भुक्तान पार्किंगमा तालिका खर्चमा। पहिलो 1 minutes मिनेट चार्ज गरिएको छैन, तब त्यहाँ एक घण्टा 100 रूबलहरू हुनेछन्। एक दिनको लागत22500 रूबलहरू खर्च हुनेछ।
<< p> उडानहरू उडानहरू पर्खँदै यात्रुहरूको लागि, ठूलो अवसरहरू खोलिएका छन्। एडलर स्टेशन को क्षेत्रमा, आरामदायी पर्खाल क्षेत्रहरू सुसज्जित छन्, सबै प्रकारका पसलहरू, पसल, क्याफेटेरिया र रेस्टुरेन्टहरू अवस्थित छन्। बच्चाहरू गेमण कोठामा समय बिताउन खुसी हुनेछन्, र वयस्कहरूले आराम गर्न सक्षम हुनेछन्। यदि त्यहाँ एक ठूलो शेयर समय छ भने, यो नजिकको आकर्षण, डल्फिनियम, एक्ल्फियम र पानी पार्क भ्रमण गर्न यसको लायक लायक हुनेछ।
ट्याक्सी। सोची अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट 10 किलोमिटर टाढा छ। एयरपोर्टको बाटोले कारबाट 1 15-20 मिनेट लिन्छ। तपाईं ट्याक्सी सेवा प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ, कार पूर्व-अर्डर गरेर, र लागत निर्दिष्ट गर्न वा आगमनबाट एयरपोर्टमा ट्याक्सी फेला पार्नुहोस्। ट्याक्सी 200/300 रूबलको औसत लागत।
M27 राजमार्गमा कार द्वारा, युएलको कांग्रेसमा रोल गर्नुहोस्। भारी सडकमा आन्दोलन जारी राख्नुहोस्। Tavrichska गन्तव्य को लागी।
सार्वजनिक यातायात। पैदल दूरीमा त्यहाँ एक सार्वजनिक यातायात छ, (2 m0 मिटर) पैदल र तपाईं आफूलाई बस स्टपमा फेला पार्नुहुनेछ सोची एयरपोर्ट। (बस नम्बर 1 155, टिकट 22 रुबलहरू, प्रत्येक 20 मिनेटमा जानुहोस्)। यो स्टपमा बाहिर जान आवश्यक छ "cpp नम्बर 1 क्वार्टर एलेक्सान्ड्रोभस्विता बगैचा।" अर्को, हिड्नुहोस् (1 किलोमिटर) सडकमा सडक चढ्नुहोस्। होटेलमा पुनरुत्थान।
<< p> IMERERTIN रिसोर्ट रेलवे स्टेशन होटेलबाट 2. km किलोमिटर हो, स्टेशनको सडक,7मिनेट कार, वा props बस स्टपहरू।
सार्वजनिक यातायात। रेलवे स्टेशनबाट "ओलम्पिक पार्क" सडक क्लाइक (40000 मीटर) मा हिंड्नको लागि ओलम्प पेलवे रेलवे स्टेशन बन्द गर्नु अघि (बस नम्बर) 55)। यो स्टपमा बाहिर जान आवश्यक छ "cpp नम्बर 1 क्वार्टर एलेक्सान्ड्रोभस्विता बगैचा।" अर्को सडकमा सडक माथि चढ्नुहोस्। होटेलको पारितको पुनरुत्थान (1 किलोमिटर)।
सार्वजनिक यातायात। एडर्लर रेलवे स्टेशन लेनिन सडक (4..4 किलोमिटर) "ड्राइभि School स्कूलको" हिंड्नको लागि। (बस नम्बर 55 55 र ​​№1255 र हरेक 1 minutes मिनेट पैदल)। तपाईंले बालवाडी स्टपमा बाहिर जान आवश्यक छ, सडकमा सडक माथि चढ्नुहोस्। पुनरुत्थान (1.3 किलोमिटर), र होटल जानुहोस्।
ट्याक्सी। एडलर रेलवे स्टेशन होटेलबाट9किलोमिटर अवस्थित छ। रेलवे स्टेशनको सडक कार द्वारा करीव 20/300 मिनेट लाग्छ। तपाईं ट्याक्सीको सेवाहरू, कार पूर्व अर्डर गर्नुहोस्, र लागत निर्दिष्ट गर्न सक्नुहुनेछ वा एक ट्याक्सी फेला पार्नुहोस्। 200/300 रूबलको औसत ट्याक्सी लागत।
सार्वजनिक यातायात। रेल स्टेशनबाट गोरली रेलवे स्टेशनको दिशामा हिंड्न (2 280 मिटर) मा हिड्नको लागि हिड्नुहोस् (2 2800 मिटर) को दिशामा (बस नम्बर) र №125-, प्रत्येक 1 minutes मिनेटमा हिंड्छौं, तपाइँ बाहिर जानु पर्छ स्टप "CPP №1 क्वार्टर अलेक्सान्काभ्रोभासकी गार्डुरो गार्डेन" UL मा सडक माथि चढ्नुहोस्। होटेलको पारितको पुनरुत्थान (1 किलोमिटर)।
ट्याक्सी। सोची रेलवे स्टेशन होटेलबाट 35 35 किलोमिटर छ। रेलवे स्टेशनको लागि सडक 400 मिनेट देखि 1 घण्टाको 1 घण्टासम्म हुन्छ। तपाईं ट्याक्सीको सेवाहरू, कार पूर्व अर्डर गर्नुहोस्, र लागत निर्दिष्ट गर्न सक्नुहुनेछ वा एक ट्याक्सी फेला पार्नुहोस्। 700/800 रूबलहरूको औसत ट्याक्सी लागत।
<< p> 1 195 22 मा, एक आधुनिक तीन स्टोररी निर्माण स्टेशन तीन वैकल्पिक आन्तरिक आन्तरिक अदालत र 55 55 मिटर घडी टावर, queters मिटर व्यासको साथ खोलिएको थियो। यो धरहरा भवनको वास्तविक सजावट भएको छ। सोचीको पहिलो रेलवे स्टेशन 1 23 2. मा एउटै ठाउँमा देखा पर्यो (तब क्षेत्रलाई निष्पक्ष भनिन्थ्यो)। 1 years बर्ष पछि, दोस्रो भवनमा यस ठाउँमा स्थापना भएको थियो।
Sochi रेलवे स्टेशन आर्किटेक्ट आर्टिस्टक्ट A. N. duskina, संघीय महत्त्व को आर्किंग को एक स्मारक। उनका उच्च जहाजहरू, राजेसी स्तम्भहरू छुट्याउन सकिन्छ। समाप्त स्थानीय निर्माण सामग्री द्वारा सम्पन्न भयो: आधार ब्यूँगस्टोनको साथ लाइनमा छ, पोलिश ग्रेनाइट स्तम्भहरू।
रिसोर्ट ट्रेन स्टेशनबाट टाढा छैन तपाईं सस्तो आवास विकल्पहरू फेला पार्न सक्नुहुनेछ: आरामदायक अपार्टमेन्टहरू, होस्टेल र होटेलमा कोठाहरू।
स्टेशनले लगभग सबै रूसी क्षेत्रहरू साथै केही इलेक्ट्रिक ट्रेनहरूमा लामो दूरीको ट्रेनको रेलहरूमा सेवा गर्दछ। तल रेलवे स्टेशनको अनलाइन तालिका हो, जहाँ तपाईं नजिकको उडानहरू, आगमन समय र ट्रेनहरू प्रस्थान गर्न सक्नुहुनेछ।
<< p> ग्रीष्म दूरी रेलहरूले ग्रीष्मका महिनाहरूमा झर्छ ग्रीष्म महिनाहरूमा झर्छ, जब पर्यटक देशका सबै क्षेत्रबाट छुट्टीमा आउँदछन्। वास्तविक तालिका जहिले पनि यन्डेक्स पोर्टल तालिकामा फेला पार्न सकिन्छ:
लामो दूरी सन्देश रूस को सबै प्रमुख शहरहरूको साथ भिन्की। स्टेशनबाट धेरै ढुवानी ट्रान्जिट ट्रेनहरू हुन्। यातायात नोडसँग तीन प्लेटफर्महरू, 11 मार्गहरू (9 घटना (9 घटना र2अतिरिक्त), चार आउटलेटहरू, लगेज डिब्बेको साथ यात्री सुरु।